Shiinaha GDU nooca silikoon warshad kululaynta carbide iyo soosaarayaasha | SICTECH
Tuulada Zhaowan, Magaalada Zhangguo, Magaalada Xinghua, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
GD / HGD nooca silsiladda kuleyliyaha carbide
MHD1600 silsiladda silsiladda kuleyliyaha
Nooca LS (labalaabasho laba jibaaran) walxaha kuleyliyaha carbide
Nooca 'GDU' silsiladda kuleyliyaha carbide
Nooca 'GC element silicon carbide element
Nooca W (saddex waji) walxaha kuleyliyaha carbide
Nooca LD (hal muquun ah) walxaha kuleyliyaha carbide
nooca gaarka ah ee silsiladda silsiladda kuleyliyaha
Nooca LS (laba jibaaran) sil ...
Nooca GDU carbide silicon nooca ...
W nooca (saddex waji) silico ...
Nooca LD (hal muquuninta) sil ...
nooca khaaska ah silikoon carbid ...
Astaamaha aasaasiga ah U nooca silsiladda kuleyliyaha carbide: Nooca kuleylka kuleyliyaha carbide waxaa laga soosaaraa laba walxaha kuleyliyaha carbide silicon leh dhammaadka qabow. Nooca kuleyliyaha carbide-ka nooca kuleyliyaha wuxuu ku xirnaan karaa xadhkaha korontada ee hal daraf foornadiisa. Waxaa badanaa loo isticmaalaa foornooyinka heerkulka sare iyo foornooyinka leh shuruudaha sare ee celceliska heerkulka foornada. Astaamaheeda waa keydinta awooda iyo nolosha foornada dheer.
Qalabka kuleylka ee silsiladda silikooniga ah wuxuu la falgalayaa walxo badan oo kiimiko ah oo ka samaysan waxyaabo ka mid ah waxyaabaha la eryay inta xabbadu socoto. Haddii ay ka falceliso qaar ka mid ah gaasaska sida biyaha, hydrogen, nitrogen, baaruud, halogen, iyo aluminium la shubay, Marka alkalis, cusbada, biraha la shubay, iyo macdanta birta ahi ay taabtaan, way fal celin karaan, way diidi karaan ama oksaydh samayn karaan. Sidaa darteed, aad ayey muhiim u tahay in la barto habka isticmaalka saxda ah, kaas oo u janjeera inuu kordhiyo nolosha shaqada ee walxaha kuleylka kuleylka ee 'silicon carbide', iyo sidoo kale heerkulka kululaynta iyo dhererkiisa.
1. Qalabka kuleyliyaha carbide-ka wuxuu leeyahay awood farsamo sare, xoog foorarsiguna wuxuu gaarsiisan yahay 100-120MPa.
2. Heerkulka dusha sare wuxuu gaari karaa 1500 oo digrii.
3. Heerka shucaaca infrared-ga sareeya, isla'eg isla'eg silicon silsilad kululeeyaha waa 5-10 jeer oo silig nikkel-chromium caadi ah.
4. Cimri dheer oo shaqeynaya, rakibid fudud iyo dayactir.
5. Qalabka kuleylka ee silsiladda silsiladda leh wuxuu leeyahay caabbinta oksidheer ee xoogga leh, iska caabbinta daxalka oo xoog leh, wuxuuna leeyahay caabbinta shoogga kuleylka oo heer sare ah.
Waxaan ka dhigi karnaa cabirka miiska sidoo kale, kaliya ii soo sheeg cabirka aad rabto.
DIAMETER (D) Aag kulul (L1) QAYBTA QABOW (L2) DISTANCE (E) BADHIG DIIMAAD
DIAMETER (D) LONGL3
18 500 450 75 18 93 3.6-7.2
Hore: Nooca 'GC element silicon carbide element
Xiga: Nooca LS (labalaabasho laba jibaaran) walxaha kuleyliyaha carbide
Electric Sic kululeeyaha
Cunnooyinka Kuleylka Foornada
Qalabka Sic kululeeyaha
Qalabka Sic kululaynta
Qalabka Silicon Carbide
Waxyaabaha kuleylka kuleylka ah ee Sic